“Guddoomiye Mursal yaan waxba lagu handadin, waxaad wadataa baasaboor Soomaali ah ee soortaada iska cun” – Kalfadhi
“Guddoomiye Mursal yaan waxba lagu handadin, waxaad wadataa baasaboor Soomaali ah ee soortaada iska cun”
April 27, 2021 April 27, 2021 Hassan Istiila
Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Gaashaandhiga Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xildhibaan Cabdifataax Qaasim, oo ka hadlayay kulankii Baarlamaanka ee horraantii bishan, ayaa Guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxdamed Mursal ku booriyay in uusan cabsasin maadaama uu wato baasaboor Soomaali ah.
“Guddoomiye yaan waxba lagu handadin, waxaad wadataa baasaboor Soomaali ah, Bardaale iyo Ceel-barde suurtaada ku cun”, ayuu yiri xildhibaan Cabdifataax.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka ayaa maanta sheegtay inay si aad ah uga walaacsan tahay isku dhacyadii rabshadaha watay ee ka dhacay magaalada Muqdisho.
Qeyb kamid ah War saxaafadeedka ayaa lagu yiri “Sida uu xoghayaha horey u sheegay, Mareykanku wuxuu diyaar u yahay inuu tixgaliyo dhammaan aaladaha la heli karo, oo ay ku jiraan cunaqabateynta iyo xaddidaadda fiisaha, si looga jawaabo dadaallada lagu wiiqayo nabadda iyo xasilloonida Soomaaliya.
Rabasho-gacan ka hadal ah ayaa ka dhacay magaalada Muqdishu, kaddib markii Golaha Shacabka ee Baarlamaanka uu muddo laba sannadood ah ay u kordhiyeen hay’addaha dowladda, taas oo ay kasoo horjeesteen musharraxiinta mucaaradka.
Ra’iisul Wasaare Rooble oo la kulmay Ururrada Bulshada rayidka, kuna baaqay xabad-joojin
Golaha dhallinyarada Qaranka Soomaaliyeed oo ku baaqay in shuruud la’aan ah loo joojiyo dagaalka, lana wadda-hadlo